Tektronix Video Telestream ထဲသို့ပေါင်းစည်းသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Telestream ထဲသို့ Tektronix ဗီဒီယိုပေါင်းစည်းမှု
Telestream ထဲသို့ Tektronix ဗီဒီယိုပေါင်းစည်းမှု
နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယား, ဧပြီ 25, 2019 -Telestreamတစ် Genstar Capital ကိုကုမ္ပဏီနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့နှင့်အတူလက်တွဲထုတ်ပြန်ကြေညာ ခွန်အား (NYSE: FTV) ပေါင်းစည်းရန် Tektronix ဗီဒီယိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗီဒီယိုအားစမ်းသပ်မှုများတွင်ခေါင်းဆောင်, အထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာစျေးကွက်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြေရှင်းနည်းများ, ထိုသို့ Telestream စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
1946 အတွက် Tektronix Inc ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်တည်ထောင် Tektronix ဗီဒီယိုဘန်ဂလို, အိန္ဒိယအတွက်သုတေသန & ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အင်ဂျင်နီယာအဆောက်အဦနှင့်အတူ Beaverton, အော်ရီဂွန်အခြေစိုက်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမြောက်အမေရိက, ဥရောပ, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, အာရှ, လက်တင်အမေရိကအတွက်ရောင်းအားစစ်ဆင်ရေးရှိပါတယ်။ သဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များအဖြစ်ထုတ်ဖော်မ Telestream ပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျင်းပပေမယ့် Genstar မြို့တော်အတွင်းငွေပေးငွေယူရလဒ်များကိုတစ် Co-ပိုင်ဆိုင်မှုအစီအစဉျတှငျ Fortive နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကွန်ယက်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေး၏ 1,000 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အပါအဝင်ကမ္ဘာတဝှမ်းကျော် 95 ဖောက်သည် Tektronix ဗီဒီယို၏ဗီဒီယိုစမ်းသပ်မှု, စောင့်ကြည့်နှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်ဖြေရှင်းချက်မီဒီယာကုမ္ပဏီများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးမော်နီတာကူညီရန်နှင့်အတူစေ့စပ်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့်အရေးပါသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပိုကောင်းအောင် မည်သည့် device ကိုပေါ်မဆိုကွန်ယက်ကိုဖြတ်ပြီး။ အဆိုပါကုမ္ပဏီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, ဝန်ဆောင်မှုအာမခံချက်နှင့်ကနေပလီကေးရှင်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ထောက်ပံ့စည်းမျဉ်းလိုက်နာမှုများအတွက်ဗီဒီယိုနှင့်အသံစမ်းသပ်ဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်ဈေးကှကျ HD 4K / UHD, IP ကိုမှ SDI နှင့် OTT ABR ကွန်ယက် linear multicast ရန်။
Scott Puopolo စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူရှိနေပါဦးမည်။ ၏တိုင်တစ်ခုမှာ Telestream'' s ကိုကော်ပိုရိတ်မဟာဗျူဟာအပြုသဘောဖောက်သည်စစ်ဆင်ရေး၏အတှေ့အကွုံဒြပ်စင်၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေး၏အရည်အသွေး impact ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုတိုးချဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ "Tektronix ဗီဒီယိုရုံထိုကဲ့သို့သော entity ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ထုတ်ကုန်လုပ်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုမဖြောင့်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုဖြစ်သူ Scott Puopolo ရှင်းပြသည်။ "နဲ့ Tektronix ဗီဒီယိုကိုပေါင်းစပ်ပြီး Telestream ပိုပြီးကျယ်ပြန့်ရောင်းအားလက်လှမ်းမမီခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းနိုင်ငံများနှင့်စျေးကွက်ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့အထံတော်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုလုံးကိုအစုစုကိုရောင်းချနိုင်သည့်မှတဆင့်ကျယ်ပြန့်ရုပ်သံလိုင်းဆက်ဆံရေးတတ်၏။ ထို့ပြင် Tektronix ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်တိုးပွားခြင်းနှင့်တိုးချဲ့နိုင်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ R & D ကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ် Telestream'' s ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအတွက်စွမ်းရည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Beaverton နှင့်ဘန်ဂလိုအိန္ဒိယနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အင်ဂျင်နီယာအခွက်တဆယ်နှင့်အတူကျနော်တို့တီထွင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်မကယ်မလွှတ်နှစ်ဦးစလုံးမှသိသိသာသာပိုဆောင်းအရင်းအမြစ်များကိုမှအကျိုးပါလိမ့်မယ်။ "
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာတမ်းကြည့်ရှုရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် Telestream ဗီဒီယိုနည်းပညာဂေဟစနစ်အတွက်ဆန်းသစ်သော software များကိုကုမ္ပဏီများစုစည်းပြီးများအတွက်ကြီးထွား-oriented ပလက်ဖောင်းကုမ္ပဏီအဖြစ်, "ဧလိ Weiss, မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ Genstar Capital ကိုမှာ commented ။ "Fortive နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ကိုအနာဂတျမှာထပ်မံစုစည်းပြီးလိုက်ရန် ပို. ပင်စွမ်းရည်ကိုငါပေးမည်။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-04-29
ယခင်: နှစ်ဦးချိန်းနှင့်အတူက CP ဆက်သွယ်ရေးအားကောင်းလာစေရန်အသံလွှင့်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး AV စနစ်အသင်းများ
နောက်တစ်ခု: Next ကို-မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဗီဒီယို Server များ၏ Launch ဖြင့် Cablecast အဝန်းမီဒီယာအသံချဲ့စက်ဘက်စုံ A သုံးပြုနိုင်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာသုံးစွဲ